အဓိကစာမျက်နှာ: အားကစားပြိုင်ပွဲ — HunterThinks.com အဓိကစာမျက်နှာ: အားကစားပြိုင်ပွဲ — HunterThinks.com
နှစျခု Dots: သငျသညျမွငျ့မားရမှတ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်လာသောအခါသင်ပိုမိုပျော်စရာရပါလိမ့်မယ်, ကြယ်နဲ့ဆုတံဆိပ်!
နှစျခု Dots ပျော်စရာဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်. သငျသညျနှစျဦး Dots ကနေပိုပြီးပျော်စရာချင်လျှင်, ပြီးနောက်သင်ဆုတံဆိပ်များအတွက်ယှဉ်ပြိုင်ရမည်ဖြစ်သည်, စုစုပေါင်းကြယ်ပွ, တစ်ဦးချင်းစီအဆင့်ကိုပေါ်နှင့်မြင့်မားသောရမှတ်များ. ငါ YouTube ကိုနှစ်ဦး Dots လမ်းလျှောက်-မှတဆင့်ဗီဒီယိုများရှိ. တစ်ဦးချင်းစီကတခြားတွေနဲ့ယှဉ်ပြိုင်ဖို့, သာ Facebook အကောင့်ကသူငယ်ချင်းရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်.